ဆောင်းလေအဝှေ့မှာ ချမ်းစိမ့်တက်လာတဲ့ အသိနဲ့ ကိုယ်မှာ ကပ်နေတဲ့ သားရေဂျာကင်ဇစ်ကို လည်ပင်းအထိ ဆွဲတင်မိပါလိုက်တယ်။ သြော်.. နှင်းတွေတောင် ခပ်စိပ်စိပ်ပိုသည်းလာပြီပဲ။ ခေါင်းမှာဆောင်းထားတဲ့ ဦးထုပ်လေးကို နားနှစ်ဖက်ဖုံးတဲ့အထိ ခပ်ဖိဖိပြင်ဆောင်း မိပြန်တယ်။ လက်အိတ်တွေအောက်မှာ မြှုပ်နေတဲ့ နာရီကို ကြည့်မိတော့ ၃ မိနစ်လိုနေပါသေးတယ်။ အချိန်ကို ဂရုစိုက်တိကျ လွန်းတဲ့ သူရောက်လာတော့မှာပါ...။
ရပ်နေတဲ့နေရာဘေး ခုံတန်းရှည်ပေါ်မှာတော့ သစ်ပင်ကြီးတွေဆီက ဖြာကျလာတဲ့ မီးရောင်စုံလေးတွေက မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်နဲ့ ကခုန်လို့ပေါ့။ သီချင်းသံမဟုတ်တဲ့ တေးသွားနဲ့ တီးလုံးသံလေးတွေက နားထဲကို တိုးဝင်လာလိုက် ထွက်ပြေးသွားလိုက်။ ခေါင်းကိုမော့ပြီး ကောင်းကင်ကို ကြည့်မိတော့ နှင်းမှုန်တွေက မျက်နှာပေါ်ကို အပြေးအလွှား တွယ်ကပ်ရောက်လာကြတယ်။ ခပ်ပြားပြား ကားအမည်းလေးတစ်စီး တုန့်ကနဲ အရပ်မှာ မော့ထားတဲ့ခေါင်းကို ပြန်ချမိပါတယ်..။
နေမင်းဟန်...!! သူက ကားထဲကနေပဲ သူ့ကိုယ်ကိုငဲ့ပြီး ကျွန်မဘက်အခြမ်း ကားတံခါးကို ဖွင့်ပေးရင်း...
“ဟင့်အင်း.. ကျွန်မ ၃ မိနစ်ပဲ စောရောက်နေတာပါ ကိုနေမင်း...”
ကားထဲက အပူပေးစက် အနွေးကြောင့် အတော်လေး နေသာထိုင်သာရှိသွားပါတယ်..။
ထုံးစံအတိုင်း နေမင်းဟန် အသံက ရိုးသားမှုတွေနဲ့ တည်ငြိမ်လို့ပါ။ များသောအားဖြင့် ကျွန်မကို အလုပ်မှာရော အပြင်မှာပါ “မေ” လို့ခေါ်တတ်ကြတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာလုံး May ဆိုတာ ကျမတို့ မြန်မာအသံထွက်တွေထဲမှာ ခေါ်ရမှတ်ရလွယ်တာလည်း ပါပါလိမ့်မယ်။ စသိချိန်ကစလို့ မိတ်ဆွေသက်တမ်း တစ်လျှောက်လုံးမှာ နေမင်းဟန်ကို ကျွန်မ “ကိုနေမင်း” လို့ခေါ်ခဲ့သလို ကျွန်မကို သူများတွေခေါ်သလို “မေ” လို့ မခေါ်ပဲ ကျွန်မနာမည်ကို “မ” ထည့်ပြီး “မငယ်” လို့ခေါ်တတ်သူပါ။ စကားပြောတိုင်းလည်း ကိုယ်နဲ့မင်းလို့ သုံးနှုန်းတတ်သလို ပိုမိုရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေဖြစ်လာတဲ့ ခုချိန်အထိ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကလည်း “ကျွန်မ”လို့ပဲ သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်..။
သူက သူ့ကားထဲက MD Player ခလုပ်လေးကိုနှိပ်လိုက်တော့ ကျွန်မနှစ်သက်တဲ့ Rock သီချင်းတစ်ပုဒ် ခုန်ထွက်လာတယ်။ အံ့သြမှုတွေနဲ့ သူ့ကိုငဲ့အကြည့် သူ့အပြုံးတစ်ခုက လှစ်ကနဲ။ “နေမင်းဟန်” ဆိုတဲ့ သူဟာ ဘယ်တော့မှ ဆူညံညံ ပေါက်ကွဲသံစဉ်မျိုး နှစ်သက်တတ်သူမှ မဟုတ်တာ။ ကျွန်မတို့ မိတ်ဆွေသက်တမ်း သုံးနှစ် ကျော်လာတဲ့အထိ သူ့ကားထဲမှာ ဒီလိုသီချင်းသံမျိုး ကြားရလေ့မရှိ။ ဒါဟာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပါပဲ...။
ကျွန်မတို့ တွေ့ဆုံချိန်တွေတိုင်း ပြောတတ်တဲ့ စကားတွေကတော့... တစ်ခါတလေ အလုပ်ထဲက ဖိစီးမှုတွေပါမယ်။ စာအုပ်တွေအကြောင်းပါမယ်။ ရုပ်ရှင်တွေအကြောင်းပါမယ်။ သီချင်းအကြောင်းတွေပါမယ်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ တချို့တစ်ဝက်ပါမယ်။ ကိုနန္ဒ မေမေ့အကြောင်းပါမယ်။ ဝတ်ရည်ရဲ့ ခပ်ဆိုဆိုး မောင်လေး အကြောင်းသူပြောမယ်။ ဒါတွေပါပဲ......။
ကျွန်မ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ရယ်လိုက်မိပါတယ်..။
“ဟန်ဆောင်ပြီး အလုပ်တွေထဲမှာ နှစ်ထားတာ တကယ့်မင်းမှ မဟုတ်တာ”
ရယ်နောက်နောက် သူ့စကားက တစ်ဝက်တစ်ပျက်မှာ ဆုံးသွားတယ်။ တိကနဲ ကားဘရိတ်ကို တစ်ချက်တော့ပြီး သူရပ်လိုက်ပါတယ်။ စောစောက နေမင်းဟန် မဟုတ်တော့ သလိုပဲ တိတ်ဆိတ်လို့ပေါ့။ ကျွန်မ ခပ်ပေပေမျက်လုံးနဲ့ သူ့ မျက်နှာကို လှမ်းကြည့်မိပါတယ်။ စတီယာတိုင်ကို ညာဘက်လက် တစ်ခုတည်းနဲ့ ဆုပ်ထားရင်း နှင်းတွေကျနေတာကို သူငေးနေတယ်။ ပြီးတော့ ခပ်တိုးတိုးအသံနဲ့ ပြောပါတယ်........
သူ့စကားသံ တိုးတိုးလေး အဆုံးမှာ ကျွန်မ ရယ်မောလိုက်မိပြန်တယ်။
နေမင်းဟန် ရှင်ပြောတယ်လေ.. ဒီနေ့ ကျွန်မရယ်သံတွေကို ကြားချင်တယ်ဆို....
သူခေါင်းကိုခါတယ်... ပြီးတော့ ကျွန်မမျက်နှာကို စေ့စေ့ကြည့်နေတယ်...
ဒီတစ်ခါတော့ ဟက်ဟက်ပက်ပက် အော်ရယ်လိုက်တာ နေမင်းဟန်ပါ။ ရှင့်ရင်ထဲကအသံတွေ ဟုတ်မဟုတ် ကျွန်မ အဖြေရှာသင့်သူ မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အသိနဲ့... အတွေးတွေကို ကျမမောင်းတုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်..။
ကျွန်မ ခေါင်းငုံ့ပြီး စလင်းဘက်လေးကို ဖွင့်လိုက်တယ်။ ညာဘက်လက်ချောင်း ထိပ်လေးတွေနဲ့ ပန်းနုရောင် ဖိတ်စာကဒ်လေးအတွေ့မှာ ကျွန်မလက်ကို ပြန်ရုတ်လိုက်မိပါတယ်။ နေပါစေတော့လေ...!! တိုက်ဆိုင်လွန်းစွာ ကျွန်မပြောမယ့် စကားတွေကို ဒီဆောင်းညဉ့်ဦးပိုင်းမှာပဲ သူကအရင် ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မ လက်လေးတွေ အနည်းငယ် တုန်ရီနေခဲ့တယ်။ ကျွန်မခေါင်းမော့ပြီး သူ့ကို ပြုံးပြီး ကြည့်လိုက်မိပါတယ်..။
ကမ်းပေးလိုက်တဲ့ ကျွန်မ ညာလက်ဖဝါးကို သူ့လက်ဖဝါးနဲ့ ဖျစ်ညှစ်လိုက်တယ်။ နေမင်းဟန်.. ရှင့်အပြုံးတွေ လဲ့ နေသလို ကျွန်မ မျက်လုံးတွေလည်း အရောင်လဲ့နေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မတွေးမိတယ်.. ကျွန်မတို့တတွေ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ရင့်ကျက်စွာ ချီးမွမ်းခန်းတွေ ဖွင့်နေကြတာ ဘာအတွက်များပါလဲ..!! နှလုံးသားထဲကို ဝင်လာမယ့် တစ်စုံတစ်ရာကို အသိစိတ်တွေနဲ့ ထိန်းယူခဲ့ကြတာကရော ဘယ်လောက်များ သေသပ်လှပခဲ့ကြလဲ... နော်..!!
ကျွန်မချက်ချင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ သူ့အတွက် ယူလာတဲ့ ပန်းနုရောင် ဖိတ်စာလေးတစ်စောင်ကို ဘယ်တော့မှ သူ့ကို ပေးဖြစ်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး.!! ကျွန်မတို့တွေ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တာတွေကို လူသားဆန်စွာ တွေးခေါ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်မနဲ့ နေမင်းဟန် ဆိုတဲ့ ရှင့်ရဲ့ ဆုံစည်းရခြင်းဟာ သုံးနှစ်ထက်သာ ပိုစောခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်လေ.......!!
မခင်လေးငယ်ရေ... လွမ်းလွမ်းလေးပဲ ဖတ်သွားတယ်နော် ....
အခုမှဖတ်ဖူးတယ် ခင်လေးငယ်ရေ။ တကယ်ကောင်းတဲ့ ၀တ္တုတိုလေးပါ။ တိုတိုလေးနဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲ။
ချစ်မလေး ဖတ်ဖူးပြီးသား ကြိုက်နေဆဲစာလေးပေမယ့် နှစ်ခေါက်ရှိတော့ ပိုမှတ်မိအောင် ထပ်ဖတ်သွားပါတယ်။
ဟိုတစ်ခါ အစ်ကိုရင်နော် ဖွသွားတဲ့ မမရဲ့ စာကြမ်းလေးတွေကိုလည်း စောင့်နေပါတယ်။:)
ဖတ်ဖူးဘူး.. ခုမှဖတ်ဖူးတာ.. ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း ကားမောင်းနေတာက ကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ်.. ခိခိခိ
အိမ်ပြန်ရောက်တော့လည်း ပြတင်းပေါက်နား ရပ်ပြီး ကောင်းကင်ကြီးကို မော့ကြည့်လိုက်တော့ လမင်းကြီးကို မိုးသားတိမ်လိမ့်တွေက အနိုင်ကျင့်လို့.. လမင်းကြီးက နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရော.. လမင်းကြီးရဲ့ ပြုံးပျော်ရွှင်မြူးနေတဲ့မျက်နှာကို ကျွန်တော် မြင်နိုင်ပါ့မလား.. အဟတ်.. အဟတ်..းP
ဒုတိယအကြိမ် ပြန်ဖတ်တော့လည်း ဖတ်လို့ကောင်းနေဆဲပါဘဲ။ ဆားချက်တာလဲ ချက်ပေါ့။ အသစ်လည်း ရေးသင့်ပြီနော်။
အသစ်ပါ မဖတ်ရသေးဘူး .. လွမ်းစရာကြီးလိုပဲ
ကံတရားပဲလား .. ၃နှစ်ထက် စောခဲ့မယ်ဆိုရင် ???
ခင်လေး ဆားလာဝယ်တယ် ဆိုင်ရှင်မတွေ့လို့ အလစ်သုတ်သွားတယ် တစ်ပိဿား)
အခုမှ ဖတ်ရတဲ့ ၀ထ္ထုလေးရဲ့ ခံစားချက်လေးက စိတ်မကောင်းစရာလေးနော်။
ကျမနဲ့ နေမင်းဟန်ဆိုတဲ့ ရှင်ရဲ့ ဆုံစည်းခြင်းဟာ သုံးနှစ်ထာသာ ပိုစောခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်... ဆိုတဲ့ အတွေးလေးရဲ့ အနောက်မှာ အဓိပါယ်တွေ အများကြီးနော်။
ချစ်တဲ့သူတိုင်း ဆုံတွေ့စေချင်ပါတယ် မမခင်လေးရေ...
ဟိုလေ.. ဟို.. Salt Maker ဆိုတာ ဘာကို ပြောတာလဲ ဟဟဟင်အမ.. မသိလို့မေးတာနော်..း-)
Exercise လုပ်ဖို့ ပြေးလိုက်အုံးမယ်
Salt Maker ဆိုတာ ဟယူမင်း ဘလော့ဂါတွေက တီထွင်လိုက်တဲ့
Machine ကြီး တစ်ခု လို့ပဲ မှတ်ထားပါကွယ်... ငှဲငှယ်
ပထမတစ်ခေါက်တုန်းက ဖတ်ဖူးပေမယ့်။ အခုပြန်ဖတ်တော့ အသစ်လိုပါပဲ။ သိပ်မငံဘူး အမ။ ဒီပိုစ့်လေးရဲ့ အောင်မြင်မှုအတွက် CHEER!!း)။
ဒီပို့စ်လေးက တင်ပြီးသား အဟောင်းဆိုပေမယ့် ကျနော့် အတွက်တော့ အရင်တစ်ခါ မဖတ်ဘူးလို့ အသစ်ပါဘဲ။
စာအရေးအသား ညင်သာညက်ညောမှု နဲ့ ဇတ်လမ်းဖန်တီးမှု အနုပညာကို မျက်ဝါးထင်ထင် အတုယူစရာ တွေ့မြင် ဖတ်ရှု့ရခြင်းပါ။
အချိန်ယူပြီး.. မဖတ်ဖြစ်သေးတဲ့ ပို့စ်အဟောင်းတွေကို ရှာဖွေဖတ်ရှု့ ခံစားပါအုံးမယ်။
မငယ်ဟိုတနေ့က ပေးဖတ်ထားပေမယ့် နောက်တခေါက် ထပ်ဖတ်သွားပါတယ်။
ဒါမျိုး ဆားလေးတွေ အမြဲ ချက်ပါလို့တောင် ပြန်တောင်းဆို ချင်မိသေးတယ်...။
လှပသေသပ်တဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အလွမ်းဖွဲ့ဇာတ်လမ်းလေး တပုဒ်ပါ
မမ ညီမလေး က တကယ့် ၀ါရင့်ဆရာမကြီးတွေ လို ရေးနိုင်တာပါလား..
ဖတ်ပြီးသူတွေအတွက်လဲ ထပ်ဖတ်ဖြစ်မဲ့ အက်ဆေးတခုပါပဲ...
အင်းနော်... အချိန်တခုသာ ရခဲ့ရင်တော့... မပြောတတ်ဘူး... ဇာတ်လမ်းလေးက တမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်...
လှပ ဆွဲဆောင်အားကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးမို့ ပြန်တင်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မခင်လေး။း)
ဖြူစင်သန့်ရှင်းသော မိတ်ဆွေစစ်တို့၏ စိတ်ဖြင့် ခွဲခွာရခြင်းသည်ကား စွန်းထင်းပေကျံသော ရန်သူနှစ်ဦးတို့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရခြင်းထက် တုနှိုင်းမရအောင် မွန်မြတ်လှပါတယ်လေ.....
ညီမခင်လေးငယ်က အဟောင်းလို့ဆိုပေမယ့် ကိုယ့်အတွက်တော့ မဖတ်ရသေးတော့ အသစ်ပါပဲလေ...ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ ဖတ်သွားပါတယ်...
အမြဲဖတ်နေကျပါ။ ဘလော့လေးလုပ်ချင်စိတ်ဖြစ်လာမိတာ မခင်လေးငယ်တို့လိုကောင်းမွန်တဲ့စာတွေဖတ်ရလို့ပါ။ မရေးတတ်ရေးတတ် ရေးထားတော့ အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်ကြပါနော်....ဝေဖန်ပေးပါလို့...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်